६ वटा खुट्टा भएको बाख्राको पाठो जन्मियो ! भगवानको अवतार भन्दै पुजा गर्दै गाउँले - Rising Dainik
December 13, 2020 December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on ६ वटा खुट्टा भएको बाख्राको पाठो जन्मियो ! भगवानको अवतार भन्दै पुजा गर्दै गाउँले
पाल्पा / पाल्पा रिब्दिकोट गाउँपालिका वडा नं ५ कुसुमखोला नैटोलको कुसुम ग्रामीण युवा कृषि फर्म तथा होमस्टेमा माउ बाख्राले ६ वटा खुट्टा भएको पाठो जन्माएको छ । श्रावण ११ गते दिउँसो खरबारीमा चर्न गएको समयमा उक्त ६ खुट्टे पाठो जन्मिएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोना महामारीबीच आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्न निर्देशन दिइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने हतारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय कोरोना संक्रमण प्रसारका दृष्टिले घा’तक हुन सक्ने औँल्याएको छ ।
ओलीको हार र प्रचण्डले मारे बाजी भन्न सकिन्छ …
January 24, 2021 January 24, 2021 Ramash Kunwar
January 25, 2021 January 25, 2021 Ramash Kunwar
February 8, 2021 Ramash Kunwar